Qeybta:Saxaafadda Clip3 min akhris
Madaxa McKnight Foundation Tonya Allen ayaa kala hadashay Chanda Smith Baker podcast Wadahadalka Chanda. Waxay wadaagtay sheekadeeda gaarka ah, iyo sidoo kale aragtida awoodda iyo sida ay samafalku ula kulmi karto xilligan taariikhiga ah iyada oo udub dhexaad u ah caddaaladda. Halkan waxaa ah dhowr qodob oo muhiim ah:
1. "Dabeecad ayaa kaa dhigaysa inaad burburto, ee ma aha awood."
Dad badan ayaa u arka awoodda mid musuqmaasuq ah, laakiin Tonya waxay caqabad ku noqotaa fikraddaas waxayna nagu dhiirigelisaa inaynaan ka fogaan adeegsiga awooddayada shaqsi, hay'ad ahaan, iyo wadajir si aan u abuurno isbeddel macquul ah oo macno leh.
2. “Waxa ay dadka badankiisu u maleynayaan inay geesinimo tahay ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan tahay, markaa ma dareemayso khatar… waxay dareemeysaa inay tahay dhisme aasaasi ah si loo beddelo."
Laga soo bilaabo isbedelka cimilada ilaa cadaalada jinsiyadeed, caqabadaha maanta ina horyaala waxay u baahan yihiin xalal geesinimo leh oo male-awaal ah. Tonya waxa ay ka hadlaysaa sababta ay uga hadlayso sababta ay ugu aqbashay in ay noqoto khatar-qaade iyo muhiimada ay leedahay in lagu raaxaysto kuwa aan ku raaxaysanayn safarka loo marayo sinnaanta bulsheed ee wayn.
3. "Samafalnimadu waa jacaylka dadka."
Tonya waxaa fikradda samafalka ah u soo bandhigtay ayeeydeed, taasoo ku soo dhaweysay deriska gurigeeda markii ay la kulmeen dhibaatooyin waxayna muujisay sida ay mas'uuliyadda wadajirka ah u tahay jacaylka iyo daryeelka bulshooyinkayaga.
4. "Waan ognahay in Dadka aadka u nugul ayaa ugu dhibka badan, markaa maxay xalasheenu u noqon waayeen, dhab ahaan, dib-u-celin - oo keliya maaha kuwo siman?"
Samafalka waxay gacan ka geysan kartaa abuurista shuruudo sinnaan weyn, laakiin waxay u baahan doontaa waaxdu inay noqoto mid cusub. Sinnaan la'aanta bulshada, sida faraqa hantida jinsiyadeed, ayaa hoos u dhacda marka samafalku maal galiyo si toos ah dadka iyo bulshada dhexdeeda.
5. "Sideen u dumiyaa caqabadaha badan ee suurtogalka ah si ay dadku u abuuraan dhagxaan jaranjaro?"
Tonya waxay la wadaagtaa waxa ku dhiirigeliyay inay ka shaqeyso samafalka iyo sida, iyada, aysan ku saabsanayn lacagta - waxay ku saabsan tahay isticmaalka mudnaanta hay'addeena si aan u abuurno xaaladaha suurtagalka ah ee isbeddelka. Waxay ku dhiirigelisaa aasaaska inay ka baxaan aagagga raaxada, isku daraan khadadka u dhexeeya samafalka iyo bulshada, oo ay habeeyaan kuwa ka baxsan qaybta aan faa'iido doonka ahayn si ay u helaan xalal waara.
6. "Waxaa nalagu qasbay waddan ahaan in aan wajahno arrinta ku saabsan jinsiyadda, laakiin waxaan leenahay daaqad gaaban."
Iyadoo laga hadlayo xisaabinta jinsiyadda iyo kacdoonka madaniga ah ee Minneapolis iyo Saint Paul, Tonya waxay dib u milicsatay shaqadeedii Detroit intii lagu jiray hoos u dhacii weynaa waxayna ku nuuxnuuxsatay inaan haysano daaqad fursad ah inaan ku samayno isbedel isbedel leh - laakiin si dhakhso ah ayay u xidhan tahay. Waxay nagu boorinaysaa in aan la xisaabtano hoggaamiyeyaasha ganacsiga, mu'asasadaha, iyo sharci-dajiyayaasha si ay ula xisaabtamaan ballanqaadyadii ay sameeyeen.
7. "Uma baahnid xulafada qolka armaajooyinka."
Tonya waxa ay ina xasuusinaysaa in ay adagtahay in la dumiyo nidaamyada aadan abuurin iyo in dadka cadaanka ahi ay u baahan yihiin in ay "shaqada qabtaan." Dhisida Minnesota cadaalad iyo sinaan ku dhisan kaliya kuma dhici karto dadka Madow iyo brown. Dadka cadaanka ahi waxa ay u baahan yihiin in ay bartaan, akhriyaan, oo ay si buuxda u fahmaan taariikhda iyo dhaawaca jinsiyadeed ee dalkan oo ay ku dhaqmaan daqiiqadaha ay ugu muhiimsan yihiin.
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, General, Philanthropy